पासाङले उपराष्ट्रपति निर्वाचन जित्लान् त ? – ABC KHABAR
October 31, 2015 October 31, 2015 ABC Desk राजनीति
१४ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तापक्षकै बागी उम्मेदवारीसहित एमाओवादीका स्थायी समिति सदस्य नन्दकिशोर पुन ‘पासाङ’ले आज हुने उपराष्ट्रपतिको चुनावमा उम्मेदवारी दिएका छन् । उनका विरुद्ध परिवार दलका दयाराम कँडेलको उम्मेदवारी परेको छ । यी दुई बाहेक कांग्रेसका अमियकुमार यादव र स्वतन्त्र सभासद् अतहर अख्तर मुसलमानले पनि उपराष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।
सामान्य अंकगणितीय हिसाबले हेर्दा उपराष्ट्रपतिमा सत्तापक्षीय उम्मेद्वार पासाङको जित निश्चित हुनुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारीलाई समर्थन गरेकै पार्टीहरुको तर्फबाट अर्को उम्मेदवारी परेपछि केही असहजता देखिएको छ । त्यसो त यो चुनाव प्रधानमन्त्रीको जस्तो प्रत्यक्ष विभाजित भएर गर्ने नभई राष्ट्रपतिको जस्तै गोप्य मतदानको आधारमा हुने छ । त्यसैले पनि केही आशंका जन्मिएका छन् । यद्यपि नेताहरुले भने स्थिति अलि असहज जस्तो देखिए पनि पासाङको जित निश्चित भएको बताए ।
‘एमालेको माधव नेपाल पक्ष र साना दलका केही रिजर्भेसन हो,’ एमाओवादीका एक नेताले भने, ‘तर त्यसले नतिजामा नै असर गर्छ भन्ने लाग्दैन । किनकि यसो भएमा वर्तमान गठबन्धन नै धरापमा पर्ने छ ।’ पासाङको प्रस्तावकमा एमालेका झलनाथ खनाल एवं समर्थकमा राप्रपा नेपालका दिलनाथ गिरी र फोरम लोकतान्त्रिकका योगेन्द्र चौधरी रहेका छन् ।
एमाओवादीसँगै यी चार दलको मत मात्रै विभाजित नभई प्राप्त भएको खण्डमा पनि पासाङ उपराष्ट्रपति हुने छन् । निर्वाचित हुन आवश्यक २९९ मतमध्ये यी चार दलसँग ३१७ मत छन्, एमाले १८४, एमाओवादी ८२, राप्रपा नेपाल २५ र फोरम १४ । यसबाहेक राप्रपाको १२ तथा साना दलको २३ मत रहेको छ । कांग्रेसको २०७ र मधेशकेन्द्रित दलसँग ४७ मत छ । तर मधेशकेन्द्रित दलहरुले चुनावमा भाग नलिने बताइसकेका छन् ।
प्रस्तावक र समर्थक पार्टीहरुको सबै मत पासाङलाई प्राप्त भएमा अन्य सबैको मत अन्यतिर वितरित भए पनि पासाङ निर्वाचित हुनेछन् । नतिजा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि किन गडबडीको आशंका गरिएको हो त ?
एमाओवादीका एक नेताले भने– ‘सरकार गठन नहुँदै गिराउने अनेक खेल सुरु भएको छ । यो त्यसैको सुरुवात हो । एमालेका माधव नेपाल पक्षधरहरु जसरी पनि ओलीलाई असफल बनाउने खेलमा छन् ।’
यो खेलमा माओवादीका लडाकुलाई राष्ट्रको कुनै पनि उच्च ओहोदामा पुग्न नदिने स्वार्थ पनि जोडिएको हुनसक्छ । विशेषतः भारत र सेनाका जर्णेलमा रहेको याव मनोविज्ञानले पनि काम गरेको बताइन्छ ।
जेजस्तो खेल भए पनि भोलि ५ बजेभित्र नतिजा सार्वजनिक भइसक्ने छ नै । पासाङ नेपालका द्वितीय उपराष्ट्रपति हुन सक्छन् कि सक्दैनन्, अब धेरै समय कुर्नु जरुरी छैन ।
by सुरज गुरुङ (Esamata)